မိုးလုံးပြည့်မုသားဝါဒီ ဗိုလ်သိန်းစိန် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “စာရေးဆရာထင်လင်းဦး ဟောပြောချက် အပြည့်အစုံ” U Htin Lin Oo’s POINT BLANK TRUTHS hit the 969 Ma Ba Tha military implant mole monks’ Aslamophobic Hate Speeches
အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို အကြောင်းပြပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပါတီနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါ ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်လာတဲ့ ဥူးဝီရသူ … »
Credit – ဦးကင်း
ဗီအိုအေနဲ့ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ သမ္မတကြီးက ဒီလိုပြောပါတယ်
[[ တစ်ဖက်ကလည်း လုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီလို ပဋိပက္ခတွေ မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ ဖိဖိစီးစီးနဲ့ ကျနော်တို့ လုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးက ဥပဒေ ဖောက်ဖျက်တဲ့လူတွေကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ကျနော်တို့ အရေးယူတာတွေ ကျနော်တို့ ဒါတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်ပက ဒီကနေ့ သူတို့စိုးရိမ်နေသလို ရခိုင်ဖက်မှာလည်း ကျနော်တို့ဒါတွေ မရှိပါဘူး။ တချို့ကတော့ ညှဉ်းပန်းလို့၊ နှိပ်စက်လို့၊ လှေတွေနဲ့ ထွက်ပြေးကြတယ် ဒါကို သတင်းတွေက ချဲ့ကားပြီးတော့ ဒါကို ရေးကြတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီအထဲကနေ ထွက်ပြေးဖို့အတွက်နေနေသာသာ ဒီအထဲမှာ နေချင်ကြတဲ့သူတွေက များပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတယ်၊ လုပ်ကိုင် စားသောက်လို့ရတယ်။ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက် လယ်ယာတွေရှိတယ်၊ နေထိုင်ဖို့အတွက် မပူရဘူး။ ဆိုတော့ ဒီကနေပြီးတော့ ထွက်ပြီး ပြေးကြ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်လို့ ဆိုတာ ဒါတွေက တချို့ သဘောထားအမြင်တမျိုးနဲ့ ကျနော်တို့ ဒီလိုတွေ ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် ရေးကြ ပြုကြတာပါ။ ဒီကနေ့အထိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာမှ ကျနော်တို့ ဆိုးဆိုးရွားရွား မရှိပါဘူး။ သူ့ဟာနဲ့သူ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပဲ။
တရားဥကဒေစိုးမိုးရေးမုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတာ သုံးနှစ်နီးပါရှိနေပြီဆိုတာ တိုင်းသိပြည်သိကမ္ဘာသိပါပဲ သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်သူတွေကို ဖော်ထုတ်ရမယ်ပြောနေတာ တရားခံတွေကို ဖမ်းမယ်ပြောနေပြီး ခုချိန်ထိ အမုန်းတရားဖြန့့်ဖြူးနေသူတွေကို မဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြီးဆုံးသက်သေပါပဲ ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ လှေနဲ့ ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူး လှေပေါ်တင်ပြီးကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ထဲမောင်းထုတ်ခံရတာ လှေပေါ်ကနေကန်ခံရတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေကပြောနေတာ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေကသက်သေခံနေတာ ကုလလူ့ အခွင့်အရေးကောင်စီကပြောနေတာ သမ္မတကြီးငြင်းလိုက်လို့ လေထဲမှာပျောက်သွားမယ့်စကားလုံးမဟုတ်ဘူး
ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ အင်မတန်စီးပွားရေးလုပ်လို့ ကောင်းပေမယ့် ဗဟိုအစိုးရက ဂုတ်သွေးစုတ်အမြတ်ထုတ်လို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေတောင် ပြည်ပထွက်ပြီး ကျွန်ခံနေရတယ်ဆိုတာ တိုင်းသိပြည်သိကမ္ဘာသိပဲ သမ္မတကြီးလိမ်လို့ လူတွေဝေဝါးသွားမယ်မထင်နဲ့ 
ဘာမျှဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ဘူးလို့ သာ မုသားပြောနေပေမယ့် ‪#‎HRW‬ လူ့ အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ တွေ နှင့် နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဂျီနိုဆိုက်လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု့ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်လို့ ပြောနေတာဟာ အထောက်အထားမရှိပဲ ရမ်းသမ်းစွပ်စွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ ဗဟိုအစိုးရအမိန့် နဲ့ စစ်တပ်နဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ တွေဟာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လူမျိူးသုဉ်းသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကသက်သေရှိပါတယ်
မိုးလုံးပြည့်မုသားဝါဒီ ဗိုလ်သိန်းစိန်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ နိုင်ငံတကာခုံရုံးရောက်တဲ့အထိ ဆက်လိမ်နိုင်ပါစေ ကဒါဖီ ဆက်ဒမ်တို့ လို သေခြင်းဆိုးပါစေ ။
This entry was posted on November 24, 2014 at 8:08 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.